Mootada iyo gawaarida ragga | Ragga Stylish
Ragga badankood, in kasta oo ay jiraan waxyaabo ka reeban, waxaan u muuqanaa inaan leenahay a jacayl qaas ah oo loo qabo wax kasta oo mishiin leh iyo xoogaa giraangiraha, sidaas darteed waxay muhiim u ahayd in koonahan xaggeena uu jiro meel u heellan matoorka oo aan ugu raaxeysan karno sida carruurta dhabta ah.
Halkan waxaad ka heli kartaa naftaada wararkii ugu dambeeyay ee mootada adduunka, maqaalada xiisaha leh ee ku saabsan gawaarida ugu fiican, mootooyinka ama wax kasta oo matoor yeelan kara oo u noqon kara mid xiiso leh dhinac ama mid kale.
Teknolojiyadaha ugu dambeeyay ee qalabka mootada
by Ragga Stylish samee Bilaha 9 .
Adduunyada mootooyinka ayaa si xawli leh u kobcaya, kaliya ma ahan qaababka iyo cabirka, laakiin sidoo kale xagga ...
Baabuurta ugu fiican adduunka
by Alicia tomero samee Sannadka 1 .
Haddii aan dooran lahayn gawaarida adduunka ugu fiican, hubaal muuqaalkeennu wuxuu ka muuqan doonaa baabuurta isboortiga, iyagoo ...
Noocyada gawaarida isboortiga ugu fiican
Waan ognahay in gawaarida isboortiga ay had iyo jeer soo jiiteen dareenka naqshadahooda iyo waxqabadka wadada. Wax badan ayaa jira…
Ganaaxyada ugu badan
by Paco Maria Garcia samee 4 sano .
Waxaa jira nooc kasta oo cunaqabatayn ah, kuwaas oo ah falcelinta maamul ee ganaaxa taraafikada ee la soo saaray. Markuu khaladku ...
Daryeelka gaarigaaga xilliga jiilaalka
Xilliga qabow ee sannadka wuxuu waxyeello badan u geysan karaa gaariga. Si kastaba ha noqotee, heerkulka ba'an guud ahaan ...
Sidee looga ilaaliyaa gaarigaaga dhaxanta?
Jiilaal baa yimid. Heerkulka oo hooseeya, tillaabooyinka qaar waa in la qaadaa si looga hortago in baabuurteennu ay dhibaato soo gaarto ...
Waa maxay giraangiraha gaarigaaga ku habboon?
Haddii gaarigaagu u baahan yahay beddelidda giraangiraha, oo aad ka shakisan tahay kuwa ugu habboon, waxaa jira doorsoomayaal badan oo aad ...
Goorma ayey tahay inaad beddesho giraangiraha gaarigaaga?
Qaybta aasaasiga ah ee wax kasta oo ku xeeran nabadgelyada gaarigaaga waa xaaladda giraangiraha….
Sidee loo keydin karaa shidaalka gaarigaaga?
Maxay yihiin hababka ugu habboon ee shidaalka loogu keydin karo gaarigaaga? Dhaqaalaha shidaalka ee gaarigaaga waa mid ...
Maxaa lagu xisaabtamayaa markaad shaqaaleyneyso caymiska gaariga?
Gaari wuxuu xambaaraa kharashyo badan, dayactir iyo dayactir, canshuurta wadada, baarkinka, ITV, iwm. Midkood waa caymis….
Sida loo cusbooneysiiyo hagaha gaariga
Nawaabiyaha gaariga wuxuu isu taagay inuu yahay qalab muhiim u ah safaradayada iyo safaradayada. Iyadoo horumarka ...
Khiyaamo si looga ilaaliyo muraayadda inay qardaqdo
Sidee loo helaa 100% isteerinka hagida?